गल्कोटमा भीषण वर्षा : खहरे खोलामा आएको बाढीले ईलाका प्रहरी कार्यालय हरिचौरको प्रतिक्षालय बगायो ! – ebaglung.com
गल्कोटमा भीषण वर्षा : खहरे खोलामा आएको बाढीले ईलाका प्रहरी कार्यालय हरिचौरको प्रतिक्षालय बगायो !
२०७५ असार १२, मंगलवार ०७:५७	Footer Slider, Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
गल्कोट उपत्यका जलमग्न, ठाउँठाउँमा पहिरो जानाले मध्यपहाडी लोकमार्गको बिजोग,सडक अबरुद्ध !
घनश्याम गौतम, गल्कोट २०७५ असार १२ । हिँजो साँझ ६ बजेदेखी परेको अबिरल बर्षाले गल्कोट उपत्यकामा निकै क्षेती पुराएको समाचार प्राप्त भएको छ ।
हरिचौरको खहरे खोलामा वर्षा सँगै आएको बाढी पहिरोले हरिचौर स्थित ईलाका प्रहरी कार्यालयको प्रतिक्षालय बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका पनाउ विश्वराज सिँह थापाले जानकारी दिए। त्यहि केहि नजिक रहेको दुर्गा भवानीको मन्दिरको प्रतिक्षालयपनि बगाएको छ ।
हरिचौरका शिक्षक सन्तोष थापाले दिएको जानकारी अनुसार हरिचौर स्थित हुलाक कार्यालय र महिला सहकारी कार्यालयलाई क्षेती पुगेको छ । त्यस्तै ईप्रका हरिचौर आडबाट बग्ने खहरे खोलाले पक्की झोलुंगे पुललाई पूर्णरुपमा क्षती पुराएको छ भने जताततै पानीपानी भएकोले यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको थापाले बताए । विहान पख ३.३० बजेको समयमा वर्षा थामिएको उनले बताए ।
हरिचौरका तस्वीरह, सौजन्य : दिनेश खत्री हरिचौर ।
यस्तै नरेठाँटी प्रहरी प्रमुखले दिएको जानकारी अनुसार दुखिलाभाटीको भण्डारवनमा भीषण वर्षा भएपछी गौदी खोलामा आएको बाढीले केहि धानखेतहरुमा भल पसेर पुरिएको छ । उनले कुनै मानवीय क्षेती नभएको पनि बताए ।
यसैवीच गल्कोट नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष वीरजंग भण्डारीले दिएको जानकारी अनुसार वडा नं ३ को धुस्तुङ वर्षा सँगैको पहिरोले ठुलो क्षती पुगेको छ । बिजुली छैन सम्पर्क गर्न समेत कठीन रहेको वडाध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
वडाध्यक्ष भण्डारीले पठाएका धुस्तुङका केहि तस्वीर
मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत गल्कोट खण्डको अधिकांश ठाउमा पहिरो गएपछि पुर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ ।गलकोट नगरपालिका वाड नम्बर ७ को दिवज्योति आधारभुत बिद्यालयमा गरिएको तटबन्धन बगाएको छ । गल्कोट नगरपालिकाको बामियाँ आगाखेत जोड्ने झुलुङे पुल बगाएको छ । गल्कोट नगरपालिका वाड नम्बर ९ को गल्याङ, रिश्मी सिचाई कुलो बगाएको छ। बाडी र पहिरो जाने करम जारी छ ।
गल्कोट नगरपालिका वाड नम्बर ५ मा राजाको पुल देखि, बसाहचोक मोटरबाटो पुर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ । गैटे खोला मोटरबाटोबाट बगिरहेको बताईएको छ ।
गल्कोट नगरपालिका वाड नम्बर १ दुदिलाभाटी ज्यामिरेका कृष्ण कुवरको घर गोठ अगाडिदेखि पहिरो झरेपछि घर र गोठ जोखिममा रहेका छन ।
गलकोट नगरपालिका वाड नम्बर ५ को हरिचौरको कौलेनि, टेउवा मोटरबाटो अवरुद्ध छ । कौलेनिका तारासिह खत्रीको घरमा माथीदेखि आएको भलबाढि कारण घरपर हिलो सहितको ढुङगाहरु थुपारेको स्थानिय बिर बहादुर थापाले जानकारी दिए।
गलकोट नगरपालिका वाड नम्बर ९ मा फिरफिरे डाडाँ भत्तिएपछि लोकमार्ग अवरुद्ध र खोलाको छेउ छाउका खेतहरु कटान गरेको छ । त्यस्तै गलकोट नगरपालिका वाड नम्बर ८ काडेबास शिवघाटको मोटरएवल पुल खोलाको उच्च जोखिममा रहेको छ भने निर्माण सामाग्रीहरु बगाएको छ ।
गलकोट नगरपालिका वाड नम्बर ६ को चरौदी गुयली सेतीबेशी मोटरबाटोमा सेतिबेसि स्थित कोल्हाल्ने डाडाँ भत्तिएपको सडक पुर्ण रुप्मा अवरुद्ध छ र उक्त पहिरोले लाल बहादुर खत्त्रीको खेत पुरिएको छ । खोलाको छेउ छाउका खेतहरु कटान गरेको छ ।
अपडेट समय ०८.४०
भरखरमात्र प्राप्त समाचार अनुसार गनपा ८ गल्याङमा पहिरो गएको छ । पहिरोले विजुलीको पोललाई क्षती पुगेको छ । पोल ढल्ने संभावना रहेको छ ।
अपडेट विहान ९. ३० बजे
गल्कोट नगरपालिका ८ का अध्यक्ष तेज त्रिलोक बहादुर थापाले भरखर दिएको जानकारी अनुसार २००६ सालमा आएको पहिरोमा पुरिएका दारपातहरु बाँसखोलामा आएको आएको पहिरोले बगाएर ल्याएको बुढापाकाहरुले बताएका छन् ।
पहिरोले विजुलीको पोल बगाएर दरम खोलाको बीचमा पुराएको र बाढी लोकमार्गबाट बग्दै स्थानीयका घरहरुमा पसेर क्षेति पुगेको उनले बताए । सवारी साधनहरु रोकिएका छन् । खुलाउने प्रयास भैरहेको छ स्थानीयहरु जम्मा भएर छलफल भैरहेको पनि वडाध्यक्ष थापाले ईबागलुङलाई बताए ।
यसैवीच पाण्डवखानीबाट सुरेश छन्त्यालले दिएको जानकारी अनुसार पाण्डबखानीमा विभिन्न स्थानमा साना तथा ठुला पहिरो गएको छ। हिजो बेलुकीदेखि परेको अविरल वर्षाले पाण्डबखानीको सोरनेका दल बहादुर गलामीको गोठ पुर्णरुपमा क्षति हुदा १ भैंसी र ६ बाख्रा पुरिएर मरेका छन्। त्यस्तै गंग बहादुर पुनको पनि गोठ परिएको र छन्त्यालजातिको कुल मन्दिर पनि पुरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।लेङ्गुरे,गाइगाउ सुनपानी गैराभाटी लगाएत विभिन्न स्थानका बाटोहरु अवरुद्ध हुनुका साथै खाने पानी र सञ्चारबाट पनि बन्चित भएको छ।स्थानीयका अनुसार करोडौंको क्षति भएको छ। सडक अवरुद्ध हुदा यातायात तथा सर्वसाधारणलाई कठिनाई भएको छ ।
स्थानीयका अनुसार २०४० सालमा पनि पाण्डबखानीमा ठुलो धनमालको क्षति भएको थियो । अबरुद्ध भएको बाटो पन्छाउन अब करिब १ हप्ता भन्दा बढी लाग्ने स्थानीयको भनाई छ ।